Terak’Antsiranana (Fitefa) : niseho sehatra indray i Bekasy J. | NewsMada
Terak’Antsiranana (Fitefa) : niseho sehatra indray i Bekasy J.
Rehefa tsy hita sy tsy re nandritra ny fotoana naharitra, niseho sehatra indray Bekasy Johnfrince, ilay mpandraharaha fanta-daza any amin’ny faritra avaratry ny Nosy. Nandritra ny fivoriamben’ny Fikambanan’ny Teraky ny faritany Antsiranana (Fitefa), tetsy amin’ny Lycée moderne Ampefiloha no nahitana azy. Fantatra fa voafidy ho filohan’ity fikambanana ity ny tenany ary resiny tamin’ny isam-bato mifanalavitra ny ramatoa iray, mpifaninana taminy.
Tena nahalalana ity filoha vaovaon’ny Fitefa ity ny fandraharahana hazo, ary anisan’ny voarohirohy tamin’ny Raharaha andramena ihany koa, ny taona 2015. Manana antontan-taratasy eny amin’ny Bianco izy, ary nampiakarina tany amin’ny rafi-pitsarana Chaine pénale miady amin’ny kolikoly (CPAC) avy eo. Notazonina am-ponja vonjimaika saingy navotsotra taty aoriana ary voalaza fa lasa tany ivelany. Anisan’ny nitaky ny handinihana sy hanohizana ny raharahany ny masoivoho amerikanina sy ny fanjakana etazonia tamin’ny alalan’ny sekreteram-panjakana amerikanina, fony fitondrana Obama.
Amin’izao vanim-potoana mafana eto amin’ny firenena mikasika ny ady amin’ny kolikoly izao, tsy fantatra raha hiverina hipoitra indray ity raharaha andramena ity, na hionona amin’ny Raharaha Razaimamonjy Claudine, ihany. Manohana amin’ny ady amin’ny kolikoly rahateo ny vondrona iraisam-pirenena, toy ny Vondrona eoropeanina (UE), ny Pnud, ny fanjakana frantsay sy amerikanina.